Harena an-kibon’ny tany: fiverenana ao amin’ny Eiti | NewsMada
Natao tany Frantsa, ny 18 sy 19 jona teo, ny fivoriambe iraisam-pirenena, mikasika ny Fangaraharana amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany vaventy (Eiti). Nitarika ny delegasiona malagasy ny minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny harena stratejika, Ravokatra Fidiniavo. Lohahevitra nodinihina ny fangaraharana amin’ny antontanisa sy ny fanorenana fitokisana, niadiana hevitra mikasika ny fahaiza-mitantana amin’ny harena voajanahary.
Nilaza ny filohan’ny Eiti, i Frederik Reinfeldt, nandritra ny fihaonany tamin’ny minisitra Ravokatra Fidiniavo, fa nahafa-po ny fivoaran’i Madagasikara ary antenainy fa ho tratra ny fanatanterahana ireo teboka miisa 15 mila asiam-panitsiana, sady ho tafavoaka amin’ny fankatoavana faharoa, ny volana desambra ho avy izao.
Tetibola ho an’ny Eiti
Etsy ankilany, nilaza ny minisitra Ravokatra Fidiniavo fa nisongadina ny zava-bitan’i Madagasikara, nandritra ny enim-bolana farany, amin’ny lafiny mangarahara, nahatonga ny fanesorana ny fampiatoana antsika, ary namitana ny tatitra ho an’ny taom-piasana 2017-2018.
Nambarany koa fa sambany eo amin’ny tantara, araka ny tetibolam-panjakana 2019, no hitondra ny anjara birikiny amin’ny tetibolan’ny Eiti ny fanjakana malagasy.
Tsy mitsahatra ny manentana ireo orinasa mpitrandraka hanao tatitra isan-taona, indrindra ny ny fandoavan-ketra sy ny tamberim-bidy, ny fanjakana.
Tsiahivina fa nitarika ity fivoriana iraisam-pirenena tany Frantsa ity i Madagasikara, amin’ny maha mpikambana ao anatin’ny tambajotran’ny minisitry ny Tetibola ho an’ny firenena an-dalam-pandrosoana miteny frantsay antsika.